Le ndoda ikhangela indlalifa yomsebenzi wobomi bayo-ikhaya layo - Indlela Yokuphila
Le ndoda ikhangela indlalifa yomsebenzi wobomi bayo-ikhaya layo
UTimoti R Latterner
Ukufumana umzi kaRoger Wohrle, ongene nzulu kwizitrato ezinamajikojiko, ezimxinwa zasedolophini iUpper Saddle River, eNew Jersey, akufani nokufumana ubutyebi obufihliweyo. Isitshixo sokuyifumana kukukhangela amasango amade esinyithi-abekwe uphawu, njengoko yayizinto zakudala ezazigada indlu yentsapho yakwaStraus. Kule propati, uWohrle uchithe phantse iminyaka engamashumi amathandathu elima, esandisa, kwaye ekhathalela ingqokelela yakhe enkulu yezinto zakudala, izityalo ezishushu, izindlu zokugcina izilwanyana, imifanekiso eqingqiweyo, kunye nomsebenzi wobugcisa. Ngoku, ujonge ukunika ngokulula konke.
U-Wohrle, oneminyaka engama-81 ubudala, uhlala kweli khaya ukusukela ngo-1964. U-Wohrle owayengumyili wegadi oqeqeshiweyo wayenomsebenzi ohloniphekileyo ngokunxibisa ezinye zezona zakhiwo zikwimeko entle eNew York enezityalo eziluhlaza kunye nobomi bezityalo — owona mgca wakhe uphambili waba ngumsebenzi wakhe ngelo xesha. -Isakhiwo esitsha seSeagram, esenziwe nguMies van der Rohe saza satyhilwa ngo-1958. Esi yayisesona sakhiwo sihle eNew York, utshilo uWohrle. Ndacinga ukuba ndingayifumana loo nto, ndingafumana nantoni na emva kwayo-kwaye ndiyenzile.
Ipropathi yakhe, egubungela iihektare ezintlanu iyonke, ibandakanya izindlu zokugcina izityalo ezininzi kunye neegaraji, ihlathi loqalo, igadi yemithi nezityalo, indlu ephambili, kunye nephuli yangaphandle. Ukungena ngaphakathi endlwini enkulu, umntu akanakukubona ukuntyiloza kweentaka rhoqo-ukuza nangawuphi na umzuzu kwenye yeentaka zakhe ezimbini, okanye nakweyiphi na iwotshi yamandulo yecuckoo ebekwe eludongeni.
Eyilwe ngu-Eleanor Pettersen, omnye wabasetyhini bokuqala abanelayisensi eNew Jersey kunye nomfundi wokuqala UFrank Lloyd Wright eTaliesin, indlu yindawo entle yanamhlanje enemigangatho yesibini evulekileyo ejonge kwigumbi lokuhlala, yonke isongelwe indawo yomlilo yanamhlanje. Imigca yobugcisa iindonga kunye neetafile nganye zineglasi kunye nemifanekiso eqingqiweyo yeglasi evela eStuben, eBaccarat, naseTiffany's. Nokuba iifestile ezithile ziphethe ibali, njengesiqingatha sedome esikhulu esivela kwivenkile yaseDe Pinna kwiFifth Avenue, efunyenwe emva kokuphuma kweshishini. Namhlanje, yamkela ukukhanya kwelanga ukukhanyisa umzobo opeyintiweyo kwitshimini yelitye. Olo cango lwaluphuma phaya luvela kwitempile ese-India ababeyilahla, utshilo u-Wohrle.
Ukusika kwindlu enkulu ngapha komoya opholileyo — indlela egutyungelweyo, ethambekileyo enemigca emininzi ekhokelela kwigreenhouse greenhouse — UWohrle ubalisa ngemisebenzi yosuku ukusukela kwiiyure ezimbini azithathayo ukunkcenkceshela zonke izityalo ukuya kolungisa indlu , kwimizobo emitsha asandula ukuyithatha kwaye kufuneka axhonywe ... ukuba unokufumana indawo engavulelwanga eludongeni. Mhlawumbi kukho abanye kwigumbi elingasemva lomdlalo, apho itafile yebhiliyadi ixhonywe ngumdlali wepiyano osebenzayo ecaleni kwebar yoqobo evela eSt. Regis Ihotele eNew York.
Ngaphakathi kwendlu eluhlaza, izidiliya zaseBarzillian zixhomekeke eluphahleni lweglasi, ezikhula ngeesentimitha ezine ngemini kwaye kufuneka zisikwe ngaphambi kokuba zitshone kwikristale, ipuli yokubhukuda eluhlaza okwesibhakabhaka. Ukufika echibini elingaphakathi, umntu kufuneka awele ibhulorho eyenziwe ngomthi ngaphezulu kwedama elikhulu, langaphakathi lekhoi.
Konke oku kukwenzela i-ajenda yakhe malunga neminqweno yakhe ngeli khaya. Ngama-81, uWohrle sisidanga sobomi kwaye uhlala yedwa, ngaphandle kwenja yakhe, uTeaser, omlandelayo kwigumbi lokulala. Akajonganga ukuthatha isithembiso kwaye ahambise indawo entsha. Ngokuthetha naye, u-Wohrle uvakala ngathi uneminyaka engamashumi amabini ubudala kuneminyaka yakhe, kodwa uyazi ukubaluleka kokucwangcisa. Amaqela otyalo mali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba anomdla kwimimandla efana neyakhe; Sele bezithengile iipropathi emva kwezakhe. Sele enikiwe kwaye waguqula imali eninzi evela kumaqela ahlukeneyo ajonge ukudiliza izakhiwo kunye nokwakha umkhondo omde wezindlu zedolophu abanokuthengisa nge-15 ngazo.
Kucacile ekuthetheni noWohrle, ukuba ngelixa esazi ixabiso lelifa, imali ayibalulekanga kuye njengokugcina into ebingumsebenzi wobomi bakhe wokulima eli lifa. Indoda ayinabantwana okanye isizalwane esisondeleyo sokunikezela ngelifa ukuba ngubani onokuyigcina. Izalamane ezandisiweyo azinamdla kugcino lwegadi. Endaweni yoko, ujonge ukuyishenxisa kwiqela elilungileyo. Ubhalise umgwebi oza kuba ngumyolelo wakhe wokugqibela ngomnye umhla, kodwa kufuneka azi ukuba kufanelekile ukuba ngubani oza kuthatha izintso apha. Okwangoku, ikholeji okanye isikolo sinokulunga, engqondweni yakhe.
Injongo kukuba isikolo okanye ikholeji zifundise ukulima apha, 'utshilo. Ayifani nayiphi na indlu eqhelekileyo. Nokuba kulimo lwezityalo, awuyiboni le nto rhoqo ngezityalo ezitshisayo kunye nehlathi loqalo ngasemva. Kukho umthwalo weenyamakazi kunye neempungutye kunye ne-chipmunks kunye nee-turkeys kwipropathi. Yindawo ethanda indalo, yeyona nto ndiyonwabelayo. ' Kwityala lakhe, kukho izandulela zento ajonge ukuyenza: Ndandinomongameli weRamapo College kunye nenkosikazi yakhe beza, kwaye bayayithanda imbono yokuyisebenzisa ukufundisa ukulima, kodwa bekukude kakhulu kwikhampasi. Kukho amanye amafa eNew York apho agcine khona [amakhaya], njenge-Wave Hill eBronx, eyayisakuba ngu-Theodore Roosevelt kunye noMark Twain werenti yehlobo.
Ezinye iindlela, ezinjengokuchazwa kweempawu okanye ulondolozo lwembali, zinokusebenza, kodwa zingene nzulu kwi-red tape kunye no-bureaucracy okoko icandelo lepropathi linqumla umda lisiya kwiNew York State. Ukuba ucinga kunzima ukufumana urhulumente welizwe avume ukugcina ipropathi, cinga ukuba uza kuphinda uyenze kwakhona loo nto okwesibini.
Ndingathanda ukuhlala apha kwaye ndiyibeke [kumyolelo wam,] uyandinika. Xa u-Eleanor Pettersen washiya ipropathi yakhe kwiDyunivesithi yaseVirginia, kungaphelanga nonyaka [iYunivesithi] wayesele eyithengisile imali yaya kwiDyunivesithi yaseVirginia. Akazange abenayo kwintando yokuba baya kuyigcina injalo, uyachaza, eyazi imigibe enokubakho yeso sipho kwabo banokuthi bakulungele ukusithatha. Ndinexhala nangakumbi lokwenza into ngoku kuba andifuni kwenzeke ngesiquphe ukuba bafe kwaye kuya kufuneka bayithengise ipropathi kuba andikayishiyi nakubani na. Akukho namnye kubahlobo bam ofuna ukuba nendlu. Andifuni ukuba oko kwenziwe ngokungxama.
Phakathi kokujonga i-Teaser, iintaka, izityalo zakhe, kunye nokuqokelela imisebenzi emitsha kunye nezinto zakudala, u-Wohrle wonwabile ngokugqibeleleyo ngamathuba anomdla wokuba ngubani olungeleyo ukuthatha ikhaya, okanye iqela elinokuthi likwazi ukwenza ukuyigcina. Iiyunivesithi, imibutho yolondolozo, amasebe epaki, qaphela ubutyebi obufundiswa apha. Ukuba kwaye ufuna ukufikelela nini kuRoger, khwaza nje; uzakuphuma abuye, unkcenkceshele izityalo kwaye ondle iintlanzi.
Isiteshi sokubulela sikaMacy
Izibane ezikhanyayo zekrisimesi